Ny OnePlus 7 Pro dia mahazo OxygenOS 9.5.11 Miaraka amin'ny Patch Security August | Androidsis
OnePlus 7 Pro Mahazo OxygenOS 9.5.11 Miaraka amin'ny August Security Patch
Ny OnePlus dia niavaka ho iray amin'ireo mpanamboatra finday avo lenta izay manome fanavaozana haingana ny fitaovan'izy ireo, ary amin'ity indray mitoraka ity dia manamafy ny tenany ho toy izany koa izy, ary noho ny namoahany fanavaozana vaovao ho an'ny OnePlus 7 Pro, izay mifanitsy amin'ity volana aogositra ity ... ny zavatra dia anio, araka ny fantatrao, no andro voalohany amin'izany volana izany; Izany indrindra no antony mahavariana fa tonga ny fonosana firmware vaovao, satria efa maraina be.
Aza adino fa ny ankamaroan'ny orinasa dia manomboka mizara fanavaozana rindrambaiko ho an'ny finday avo lenta tsirairay avy ao anatin'ny andro vitsivitsy na herinandro vitsivitsy amin'ny volana OTA resahina, fa ny OnePlus dia zara raha tafiditra ao anatin'ity famelabelarana ity.
Ny kinova OxygenOS izay raisin'ny OnePlus 7 Pro amin'izao fotoana izao dia ny laharana 9.5.11. Io, araka ny efa notaterina, dia natolotra tany amin'ny faritra sasany ora maro talohan'izay. Tsara ny manamarika fa tsy fahita firy ny mahita an'io haingam-pandeha io, raha ny fonosana OTA avy amin'ny finday avo lenta no resahina.
OxygenOS 9.5.11 dia miaraka amin'ny patch patch mifanaraka amin'ny Aogositra. Ny fanavaozana koa dia mampihatra fanamboarana fiarovana isan-karazany, fanatsarana marobe amin'ny famirapiratanan'ny Adaptive ary "fahatsapana mikasika ny fikitika an-tsarimihetsika mandritra ny lalao", ary ny fanamboarana ny paompy tsy nahy eo amin'ny bara fampandrenesana mandritra ny antso iray. Ho fanampin'izany rehetra izany dia nohavaozina ny serivisy serivisy finday ao amin'ny Google ary misy ihany koa ny "fanamboarana sy fanatsarana bug ankapobeny".
Raha mpampiasa OnePlus 7 Pro ianao dia tadidio izany ny fanavaozana dia mety hatolotra miandalana. Noho izany, mety mbola tsy misy amin'ny findainao io. Na izany aza, ora vitsivitsy na andro vitsivitsy fotsiny no ahatongavany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » OnePlus 7 Pro Mahazo OxygenOS 9.5.11 Miaraka amin'ny August Security Patch
Galaxy Tab S6 vs Galaxy Tab S5e: Inona no niova teo amin'izy ireo